Tag: istaraatijiyad seo | Martech Zone
Tag: seo istaraatijiyad
Marka la gaaro 2017, iibka e-commerce waxaa lagu qiyaasaa inuu gaaro $ 434 bilyan oo Mareykanka ah. Dhab ahaantii waxaan horumarinay boggan si aan ugu darno xoogaa xalal ecommerce iyo istiraatiijiyado ah ka dib markii aan tijaabinnay xalal warbixineed oo otomaatig ah sanadkii hore. Inbadan ayaa imaanaysa bilaha soo socda - waanu balan qaadeynaa! Istaraatiijiyadaha 'Ecommerce Platform' waxay ku horumariyeen macluumaadkan istaraatiijiyadaha ecommerce kuwaas oo kaa caawin doona inaad horumariso ganacsi waara oo aad diirada saarto waxa ay tahay inaad sameyso si aad ugu guuleysato, bartilmaameedka
Jimce, Maarso 22, 2013 Jimce, Maarso 22, 2013 Douglas Karr
Shalay waxaan qabanay shir weyne heer gobol ah oo ay soo qabanqaabisay Dakhliga Waqooyiga. Mawduucyadu waxay u dhexeeyeen ganacsiga, tikniyoolajiyadda iyo suuqgeynta waxaanan maalintaas ku furay dood ku saabsan halista SEO. Wax badan baa iska beddelay warshadaynta mashiinka raadinta. Mid ka mid ah kaqeybgalayaasheyda ayaa xitaa ila kaftamay aniga oo leh talo talo oo is khilaafsan dhowr sano ka hor. Maan diidin. Waxaan gabi ahaanba badalay ra'yigayga ku saabsan sida SEO u noqon karo
Saameynta Saameynta Bulshada Miyuu Yahay?
Tani waa mid kale oo ka mid ah doodaha waawayn ee sababaya iyo isku xirnaanta. Helitaanka tixraacyada bulsheed si toos ah saamayn ugu yeelanaysaa qiimeynta mashiinkaaga raadinta? Mise waa bulsheed barometer weyn oo waxqabad ku leh websaydhka oo dhaliya arrimo kale oo saameeya darajada. Google iyo Facebook runti saaxiibbo ma ahan xilligan - iyadoo Microsoft ay marin u leedahay dhaqdhaqaaqa Facebook, shaki ayaa ku jira in Google wax aragti ah leeyahay (in kasta oo laga yaabo inay u maraan dhinacyada saddexaad). Shaki iigama jiro Google
Isniin, Disembar 5, 2011 Axad, Disembar 4, 2011 Douglas Karr
Tilmaamahan 'infographic' waxaa loogu yeeraa Hage Sawireed oo ku saabsan SEO otomaatiga, laakiin runti maahan mid otomaatig ah, waxay ku saabsan tahay hannaanka loo baahan yahay in lagu hagaajiyo natiijooyinka suuqgeynta mashiinka raadinta istiraatiijiyad socota. Dhinacyada hawshu waa iswadayaan… laakiin haddii aad samaynaysid waxyaabo sida iibsashada iyo otomatiga backlinks, shirkaddaadu waxay ku wajahan tahay dhibaato. Raadinta mashiinka raadinta ayaa inta badan ah nidaam gacmeed kaa doonaya inaad sameyso cilmi baaris badan, hagaajiso waxyaabahaaga